Updated 22 December 2020, text added below 8 November 2021. (Published 22 April 2020).
Hagahan hadda lama cusboonaysiinayo, laakiin goobaha shaqada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay raacaan tilmaamaha goobta shaqada. Hagahan waxa uu kaa caawinayaa haduu cudurka faafo uu ku sii xumaado Finland ama faafitaanko uu shaqoda ku sii bato. Siyaabaha ugu muhiimsan ee looga hortagi karo cudurka faafitaankiisa waa in la tallaalo dadka, gacmaha la dhaqo, oona laga warqabo hawada is badelkeeda.
Marka uu tallaalku korodho, xannibaadaha iyo talooyinka qaranka waa la joojin doonaa. Xakamaynta iyo tallaabooyinka ka hortagga caabuqa ee goobta shaqada sidoo kale waa la yareenaayaa. Tallaabooyinka ka-hortagga goobta shaqada ee caabuqyada halbowlaha waxay ku saleysan yihiin qiimeynta khatarta ah ee loo-shaqeeyaha, taas oo ah in si joogto ah loo cusbooneysiiyo, iyadoo la tixgelinayo xeerarka gobolka iyo kuwa maxalliga ah. Hawlaha goobta shaqada waxaa go'aaminaya loo shaqeeyaha, kaas oo la tashan kara caafimaadka iyo badbaadada shaqada.
Baska ama nooca kale ee gaadiidka bulshada qofka u qufacayo si xoogan waa in la geeyaa dhinac cad (doorbidia ka fogaanshaha 2 miitir) ee rikaabka kale, haddii ay suurtogal tahay.  Maaskaraha wajiga waxaa la siin karaa rikaabka jiran, gaar ahaan gaadiidka safarka dheer.